5 fevrie, 6 fevrie, 7 fevrie ary 18 fevrie 2014 - Lakroan'i Madagasikara on line - Les actualités sociales et religieuses à Madagascar
Mihazakazaka ny fotoana. Efa 10 andro sahady no nametrahana ny Filoha Hery Rajaonarimampianina amin’ny toerana maha filoham-pirenena azy. Olom-boafidy. Tsy mazava amin’ny betsaka ny maha samy hafa ny filoham-pirenena voafidy (tahaka an’i Hery Rajaonarimampianina) sy ny filoham-pirenena nametra-tena na napetraka (tahaka an’i Andry Rajoelina filohan’ny Tetezamita). Samy mitondra firenena tokoa izy ireo. Ndeha avela ho an’ny mpahay lalàna sy mpandalina lalampanorenana ny mamahavaha izany.
Ny anio kosa ny ho entintsika eto dia momba ireo daty manana ny lanjany ato ho ato. Ny mahazatra ny mpanao gazety dia ny 100 andro voalohany eo amin’ny fitondran’ny Filoha amperinasa. Inona no fanapahan-kevitra voalohany noraisiny ? Inona no heverina fa zava-dehibe fa nolalovany fotsiny ?
Mialoha izany 100 andro izany dia maromaro ireo daty akaiky tsara marihina ao anaty diary : 5 fevrie, 6 fevrie, 7 fevrie ary talata faharoa aorian’ny 6 fevrie izany hoe ny 18 fevrie izany.
5 fevrie. Na inona na inona finiavan’ny mpitondra iray dia misy ireo lalàna mamaritra ny lalan-kombany. Ny Lalampanorenana no voalohany amin’izany. Voalazan’ny Lalàna fototra fa : “Ny Filohan’ny Repoblika no manendry ny Praiminisitra araka ny tolotry ny antoko na vondrona antoko maro an’isa ao amin’ny Antenimierampirenena.” Ny andinin’ny faha-54 andalana voalohany no ahitana izany. Teny gasy mazava. Manana safidy izany ny filohan’ny Repoblika na mandray ny anarana avy amin’ny antoko maro an’isa ao amin’ny Antenimieram-pirenena na izay anarana naroson’ny vondrona antoko maro an’isa. Raha izao firafitry ny fehezan-teny izao dia azo heverina fa samy afaka manolotra anarana ireo sokajy roa ireo. Fomba fijery ety ivelany izany. Tokana ny rafitra afaka manapaka izay tena fandikana na hambaran’io andinin-dalàna io. Ny FAL, Fitsarana Avo momba ny Lalam-panorenana, (fantatry ny rehetra amin’ny fanafohezana hoe : HCC) no manana ny teny farany. Nangataka ny hevitry ny FAL ary ny mpitondra ankehitriny. Inona no izy ? Tsy teny sinoa akory io fa teny malagasy mazava. Saingy… samy manana ny handroritany azy ny tsirairay ka mila mpitsara. Ny 5 fevrie na febroary izao no hamoaka ny heviny ny mpitsara mandrafitra ny FAL. Didy tsy azo hivalozana no hivoaka eo. Raha tsorina ny resaka dia hoe : MAPAR irery ve no afaka hanolotra anarana ho praiminisitra sa misy vondrona antoko (antoko nitambatra ao anaty Antenimiera) hafa ? MAPAR no manana olom-boafidy betsaka raha ny vokatra navoakan’ny CENIT no itarafana azy.
Kajikajy politika ambony latabatra izany ary manakana ireo mpanadihady politika sy mpanao politika zatra mitafa amin’ny mpanao gazety hiteny.
6 fevrie. Voalaza fa ny 6 fevrie izao ny CES, Cour électorale Spéciale, na fitsarana manokana momba ny fifidianana, no hamoaka amin’ny fomba ofisialy ny vokatry ny fifidianana solombavam-bahoaka natao ny 20 desambra 2013. Tsaroana fa naharitra ora 7 be izao no nitanisain’ny CENIT ny vokatra teo aminy. Haharitra hafiriana àry ny an’ireo CES ? Tsy hihoatra an’izany kosa angamba na eo aza ireo fitarainana sy fitoriana marobe (maherin’ny 600 isa) tonga sy tsy maintsy nodinihan’ny CES.
Tsy ny fotoana ho lany loatra ny olana. Fa hisy firy ny fifidianana tsy maintsy haverina satria dia maro ireo filazana fisian’ny hosoka hita an-gazety sy haino aman-jery. Na kandida lany mainka ireo tsy lany dia samy “nitatasiaka” (fiteny ankehitriny izany, hilazana fa miteny masiaka) ny fisian’ny halatra nandritra iny fifidianana iny. Halatra bevata ve ? Asa. Hisy ve ny famerenana fifidianana ? Raha misy dia ho firy no ho voakasik’izany ? Ny 6 fevrie no handrenesana ny marina.
Tsy fantatra izay ho fiantraikan’izany rehetra izany. Hitondra fitoniana sa hampitroatra an’ireo nihevitra fa efa lany ? Tsiahivina fa misy ireo efa nanao “arrosage” na fifaliana bevata. Nisy ireo kandida efa nanolotra volabe an’ireo fokontany nifidy azy.
7 fevrie. Tsy dia misy hifandraisany amin’ny resaka fifidianana loatra izy ity. Tsiahivina fa niakatra teny amin’ny Lapa Ambohitsorohitra ireo vahoaka namporisihan’i Andry Rajoelina ary notarihan’i Monja Roindefo sy jeneraly Dolin ny 7 fevrie 2009. Nisy nitifitra teny ary maro no maty. Fotoam-bavaka teo anoloan’ny Lapa no natao nanomboka ny taona 2010. Ny olana amin’ity taona 2014 ity dia tsy eo amin’ny fitondrana intsony i Andry Rajoelina izay nitarika ny olona hiakatra teny Ambohitsorohitra ny 7 fevrie 2009. Amin’ity kosa dia hitarika ny olona hanao diabe miainga eny Mahamasina ny filohan’ny Tetezamita teo aloha ary hiakatra eny Ambohitsorohitra. Hahazo alalana ve ? Fantatra fa tsy nahazo alalana avokoa izay nangataka hanao diabe raha resaka politika no antony.
Ny ampitson’ny famoahana ny vokatra ofisialin’ny fifidianana depiote no hanaovana io diabe io. Hisalotra ny samboady àry ve ireo depiote hamaly antso ? Sa ny fanatrehana ny fivoriana voalohany vao tena depiote ny olom-boafidy ho depiote iray ? Avela ho an’ireo mpandalina lalàna indray koa ny amin’izay.
18 fevrie. Ny talata faharoa aorian’ny famoahana ny vokatra ofisialy no mivory voalohany ireo voatendry ara-dalàna. Hiandry izany ve ny fanendrena ny Praiminisitra ? Ampahany izany. Ny faharoa ary goavana koa dia handrafitra ny biraon’ny Antenimiera ireo depiote ireo. Ho raikitra ny ady varotra. Nahazatra tao amin’io andrim-panjakana io izany. Hiverina ve ?
Santionany amin’ny daty ihany ireo naroso ireo. Hatreto aloha tsy hita loatra ny fanovana mahery vaika tokony hifanaraka amin’ny fahatongavan’ny Hery Vaovao eo amin’ny fitondrana. Fisalasalana no hita. Folo andro aty aorian’ny nametrahana ny filoha dia mbola tsy voatendry izay mpikambana mandrafitra ny kabinetra sy ny sekretera jeneralin’ny fiadidian’ny filohan’ny Repoblika. Tsy miandry anefa ny raharaham-pirenena. Ka sao tratrin’ny “Masikiny tsy mahadiny raha ela” zalahy e ?!!!